मायालु जोडीको स्वर्ग!
बेनी, २८ साउन (सेतोपाटी)
नामै कति मिठो–लभ्ली हिल ! मायालु जोडीहरुको स्वर्ग भएकाले म्याग्दीको एउटा डाँडोलाई अचेल जनबोलीमा लभ्ली हिल भनिन्छ। जहाँ निर्धक्क प्रेमालाप गरिरहेका दृश्य देखिन्छन्। त्यसो त डाँडामा हिजोआज पारिवारिक भ्रमण गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ।
यसरी बेनी नगरपालिका–२ को डाँडो लभ्ली हिलका रुपमा प्रख्यात हुँदैछ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको शिरमा अबस्थित लभ्ली हिलको चिसोमा रमाउन दिनदिनै नेपालीको घुइँचो लाग्छ।
बेनी बजारबाट दुई किमि दुरीको डाँडासम्मै मोटरबाइक र जिप पुग्छन्। बजारबाट आधा घन्टा पदयात्रामा पुगिने डाँडाबाट बेनी बजार, वरपरका पहाड र धौलागिरि हिमालको सौन्दर्यमा रमाउन सकिन्छ। डाँडाको फेदीबाट उकालो चढ्ने ढुँगाको सिंढी बनाउन सके थप आकर्षण बन्छ।
केही महिना अघिसम्म सिमित मायालु जोडि पुगेर प्रेमालाप गर्ने डाँडामा अचेल चहलपहल बढेको छ। विशेषतः बेनी बजारको गर्मी छल्दै शीतल हावामा रमाउनेहरु डाँडामा पुग्छन्। बजार भन्दा २३० मिटर अग्लो लभ्ली हिल (१०८० मिटर) मा सिरसिरे वतास चलिरहन्छ।
केही महिना अघि स्थानीय ध्रुबराज कार्कीको अध्यक्षतामा लभहिल डाँडा पर्यटन पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको छ। समितिले पर्यटन कार्यालय र बेनी नगरपालिकाको करिब १० लाख रुपैयाँ बजेटबाट डाँडामा गोलघर र रेलिङ निर्माण गरेको छ। गोलघरले आकर्षण बढाएको छ।
बेनी बजारका अगुवा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजेश शाक्य लगायतले केही वर्ष अघिदेखि लभ्ली हिलको विकास गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। अहिले विकासको काम सुरु भएको छ, स्थानीय जुर्मुराएका छन्। अब सुरक्षाका लागि पुरै डाँडाको छेउमा रेलिङ, शौचालय निर्माण, फोहर व्यवस्थापन र रेष्टुरेन्ट आबश्यक छ।
बेनी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर थापा लभ्ली हिललाई आकर्षक पार्कका रुपमा विकास गर्ने योजना सुनाउँछन्। ‘यस वर्ष नगरपालिकाले रामायण पार्क बनाउन प्राथमिकता दियो’, उनले भने, ‘अर्को वर्षको पर्यटन बजेट सबै लभहिलमा खन्याउन जोड दिन्छु।’
लभ्ली हिलको गुरु योजना बनाएर विकासमा अघि बढ्ने उनको सोच छ। डाँडाको प्राकृतिक स्वरुप बचाएर बगैंचा बनाउने, एउटा मन्दिर बनाउने उनले योजना सुनाए। साथै डाँडामा तालिम हल बनाउन सके शितल हावा खाँदै अन्तरक्रिया, गोष्ठि र तालिम गर्न सकिने उनले देखेका छन्। त्यो सँगै अझै माथि डाँडाको ज्यामरुककोटलाई जोडेर एकिकृत पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ।
दाताहरु पाएमा तल म्याग्दी खोला किनारको हाडेभिरपुल देखि लभ्लीहिलसम्म लिफ्ट राख्ने योजना पनि वडाध्यक्ष सुनाउँछन्। त्यतिले पुग्दैन, संसारभरिका मायालुहरुलाई लभ्ली हिलमा आकर्षित गर्न त्यहाँ एउटा माया झल्काउने ठूलो मूर्ति चाहिन्छ। आमाले बच्चालाई मायाले च्यापिरहेको मूर्ति होस् या जोडीको प्रेमालाप झल्काउन, कस्तो बनाउने त्यसको टुँगो स्थानीय र नगरपालिका मिलेर गर्न सके राम्रो हुन्छ।
लभ्ली हिलले बेनी बजारको नाइट स्टे बढाउन सक्छ। लभ्ली हिलमा स्वदेशी मात्रै होइन, विदेशीलाई समेत तान्न सकिन्छ। त्यसका लागि अमर प्रेमको कामना गर्दै डाँडामा कुनै चिज (फूलपाती, धागो, शुद्ध जल आदि) चढाउने परम्परा बसाउन सकिन्छ। लभ्ली हिलले बेनी बजारको नाइट स्टे बढाउन सक्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २८, २०७४, ०८:१४:३८